Sheekh Shariif: Somalia waxaa dib u dhigay Qabiil & Dagaal – Qaranimo Online
You are here: Home 2015 December 18 Sheekh Shariif: Somalia waxaa dib u dhigay Qabiil & Dagaal
Sheekh Shariif: Somalia waxaa dib u dhigay Qabiil & Dagaal
Posted on December 18, 2015 by Ali Omar Ghedi | 0 Comments
Muqdisho, 18 December 2015: Sheekh Shariif, Madaxweynihii hore ee Somalia oo ka waramay xaalada Soomaaliya, ayaa sheegay in dalka waxyaabaha uu ka horumari la’yahay ay ugu horeeyaan Dagaalka Sokeeye iyo Siyaasadda Qabiilka ku salaysan.
“Dagaal haddii uu waxtarayo Somalia Horumar ayay ku gaari lahayd, Qabiil haddii uu Faa’ido leeyahayna Maanta dalka sidan ma ahaadeen, markaa waxaan leeyhay kuwa hurinaya Dagaal Beeleedka Caqligiina ha shaqeeyo,” ayuu yiri Sheekh Shariif. Sheekh Shariif ayaa sheegay in dalka uu ku filan yahay Shacabka oo dhan haddii Nabad jirto, balse uu Ciriiri ku noqonayo marki Dagaalka uu socdo, ee qofba qofka kale dilayo, barkicinayo.
Wuxuu ugu baaqay dhinacyada Dagaalada Qabiilka ku salaysan ku dhexmarayo dalka, inay Nabadda u dhega-nuglaadaan, oo ay u hogaansamaan Waxgaradka & Odayaasha Dadaallada ay wadaan ee Nabadda lagu raadinaayo.
Guddoomiye Cismaan Barre: “kama adkaan karno Al-shabaab March 11, 2018
Somaliland, oo war cusub kasoo saartay, Baasaboorka Soomaaliya August 4, 2016
Xildhibaan Caan ah oo geeriyooday November 21, 2016
Somalia Blocks Returnees, Cites Inadequate Humanitarian Support August 30, 2016
C/wali Gaas oo fariin u diray Al-Shabaab June 10, 2016
Beware new +252 telephone scam, Swedish police warn May 31, 2017